BAOLAI:MARO ENTANA VAOVAO 1er choix MANAMAIVANA NY ANDAVANANDRO · déliremadagascar
« Hanampiana ny rehetra hanamaivana amin’ ny rotoroton’ ny andavanandro dia maro isankarazany ny entana « 1er choix » sady vaovao ato aminay. Izay natao mifanaraka amin’ ny filàna sy ny fahefa-mividin’ny tsirairay hatrany » hoy ny tompon’ andraikitra. Ny atsipiran’ izany rehetra izany dia azo fantarina ao amin’ny site web sy pejy facebook baolai ary ao amin ny laharana finday 034 56 288 21 (ora fiasana). Dia hiavaka ao anatin ‘ny maro ny volana oktobra hoavy miaraka amin’ ny tranombarotra « Baolai ».
Santionany ihany no tanisinay amintsika, ao ny laser TV samihafa misy hatramin’ ny 120 « , télé led ary Smart tv izay misy manomboka 32″ hatramin’ ny 85 » (misy antoka 1 taona daholo), climatiseurs, fer à lisser (cheveux), Smartphone, réfrigérateur, cuisinière à gaz sy électrique, subwoofer, four micro – onde, amplificateur, machine à laver, panneaux solaires mono sy polychristalline.